ဒီလိုစည်းကမ်းပျက်လို့ရလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » ဒီလိုစည်းကမ်းပျက်လို့ရလား
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Feb 14, 2012 in Complaint / Claim, Photography | 34 comments
စည်းကမ်း ဓါတ်ပုံ မြင်မိမြင်ရာ
ဟိုတနေ့ကကျွန်မတို့အပြင်သွားတော့ နာနတ်တောလမ်းနဲ့အရိုးဆေးရုံလမ်းကိုဆက်ထားတဲ့ လမ်းသွယ်လေးကနေသွားမိပါတယ်။ မနက် ၈ နာရီလောက်ပေါ့။ အဲဒီလမ်းထဲမှာက Star အအေး ဂိုဒေါင်ရှိပါတယ်။ အအေးပို့မယ့်ကားတွေက အဲဒီမှာမနက်ဆိုရင် အအေးပုလင်းတွေလာထုပ်ရပါတယ်။ ပုံပါအတိုင်းလမ်း ကို နှစ်ဖက်လုံးအပြည့်ရပ်ပြီး အအေးပုလင်းတွေတင်လိုတင်၊ လမ်းထိပ်မှာရပ်ပြီး ကွမ်းယာဝယ်လိုဝယ်နဲ့ စည်းပျက်ကမ်းပျက်လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတာတွေ့ လို့ဓါတ်ပုံရိုက်ယူလာခဲ့ပါတယ်။ လမ်းကျဉ်းလေးမှာတဖက်ကလာတဲ့ကားတွေက ရပ်စောင့်ရပါတယ်။ သူတို့စက်ရုံပိုင်လမ်းလိုပဲ ထင်သလိုလုပ်နေကြပါတယ်။ စိတ်ပျက်စရာပါ။
ဆောရီးပါ။ ခေါင်းစဉ်စာလုံးပေါင်းမှားသွားတယ်။ စည်းကမ်း ပါ။ ၀စ်စနှစ်လုံးပေါက်ကျန်ခဲ့လို့ပါ။ Ma Ma မလာခင်ပြင်ပြီးပြေးမှ။ ပြေးပြီ။
ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့မပုတင်မပါဘူးလို့ 
ငဝိုင်းပါရင် အေးဆေး တဲ့
နောက်တခါဒေါ်စိန်ပေါက်ကိုလာခေါ်မယ်နော်။ ဒေါ်စိန်ပေါက်ပြောပေး။ သများဆိုချဲခံရမှာ။ ဒေါ်စိန်ပေါက်ရှိုချစ်ချာရေးဆိုပြီးဖယ်ပေးမှာ။
ကိုသစ် တစ်ခါက ပြေတာ ဒါမျိုးလေးတွေ နေမှာ
ဒါတွေ ဖြစ်နေတယ် ဒါလေးတွေ ပြင်ပေးပါ ( ပုံလေးတွေနဲ့ )
နောက်ဆို ငါ တို့ စည်းကမ်းတကျ နေမှ ဟေ့ တော်ကြာ ဂေဇက်ထဲ ရောက်သွားမယ်
ဂေဇက်ပိုးထ ရာမှ သွားလေရာ ကင်မရာ တင်ထားသည့် အကျင့်စွဲသွားပြီထင်တယ် ။ အပြည့် အ၀ အားပေးတယ် ။
ကျွန်တော်ဆို မျက်လုံးထဲ ထောင့်မကြိုးတာ ကန့်လန်ရပ်ထားရင် ခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်တယ်
မဟုတ်ဘူး။ ရိုက်ချင်လွန်းလို့ကိုပေစောင့်နေတာ။ ဘယ်လောက်ရပ်နိုင်မလဲလို့။
အစ်မက မိန်းကလေးဆိုတော့လည်း … အစ်မ အမျိုးသားကို ကန်ခိုင်းလိုက်ပေါ့ … (ဖြဲသီး စကားကို ဖြည့်စွပ်လိုက်တာပါ .. ဟဲဟဲ … )
အများပိုင်လမ်းမှာ ဒီလို စည်းကမ်းမဲ့တာတွေကတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာ… ဒီလို စည်းကမ်းမဲ့တာကို ရိုက်ပြီး တင်နိုင်တာကိုလဲ ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ…
မသိလို့ တစ်ခုမေးချင်လို့ပါ..သွားလေရာကင်မရာ ဆောင်ထားပါတယ်..
အဲဒါ အမြင်မတော်တာတွေကို ရိုက်လုိ့ရလား… တရားဝင်ရဲ့လား..
တော်ကြာမင်းကဘယ်ကလဲ ဘာလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်နေရင် ကိုယ်ကမပြောတတ်ရင် ရှိစုမဲ့စု ကင်မရာလေး ပါသွားမှာစိုးလို့ပါ..အမြင်မတော်တာတွေကို လက်ယားနေတယ်. ရိုက်ချင်နေတယ်
ဒီလိုရိုက်လို့ ဘယ်သူတွေဝင်ဖတ်ပြီး ဘယ်လိုတွေ ပြင်ကြမလဲ သိချင်လို့ပါ…
ကျွန်တော်တို့ ဒီိလိုရိုက်ပြီး တင်တာတွေကို တစ်ကယ်အရေးတယူရှိရင် ကောင်းတယ်………..
အပေါ်ကမေးထားတာလေးတွေကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါဦး…
သိအောင်ရိုက်လို့တော့ဘယ်ဖြစ်မတုံး။ ဂွမ်းသွားမှာပေါ့။ မသိအောင်ဒိုင်လျှိုလေးပေါ့။ ကင်မရာထက်ဖုန်းကတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဖုန်းဆက်နေတယ်ပေါ့။ ဟီဟိ။ ကိုယ်ကအမြင် မတော်တာရိုက်တာလေ။ တရားမ၀င်ဘူးလို့သူတို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့လုပ်နေတာလဲတရားမှမ၀င်တာ။ ဒါမျိုးဆိုတာဂျာနယ်ထဲပါသွားရင်သူတို့ နာပြီလေ။ ကားနံပါတ်ပါပါနေတဲ့ဟာ။ ကျွန်မလဲဒါမျိုးတွေဂျာနယ်ထဲထဲ့ချင်တာ။
အစ်မရေ … ဂေဇက်မှာ စာဖတ် ၊ စာရေးကတည်းက လက်က အငြိမ်မနေတော့တာ .. ကိုယ်တွေ့ … ။ တစ်ခုခုဆို ရိုက်ဖို့ပဲ စောင့်နေတာ …. ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က အနီးနားက စက်ရုံ ဆန္ဒပြတာကို … ရုံးကဒရိုင်ဘာခေါ်ပြီး … ဓါတ်ပုံထွက်ရိုက်တာ … ။ ပထမတစ်ကြိမ် လွတ်သွားတယ် .. ပုံသိပ်မကြိုက်သေးတာနဲ့ .. ဒုတိယအကြိမ် … (သုံးမိနစ်ပဲခြားတယ် ပိတ်ထားတဲ့ လမ်းကို ပြန်ဝင်လာပြီး ) အဲ့ဒီလမ်းကို နောက်တစ်ခါ ပြန်ဝင်ရိုက်တာ … ကားတားပြီး စစ်ပါလေရော … ။
အဲ့ဒီတုန်းက ကိုယ်ကလည်း ဥာဏ်နည်းပါတယ် … ဖုန်း မန်မိုရီကဒ်ထုတ်ပစ်ဖို့ …. အကြံမရခဲ့ဘူး … ။ ဒါနဲ့ပဲ … မန်မိုရီကဒ် ကလေး ပါသွားရှာတယ် … ။ တစ်သက်မှာ ပြန်မရတော့တဲ့ အမှတ်တရများစွာရဲ့ပုံရိပ်တွေလည်း … ပါသွားခဲ့တယ်လေ ..
နောက်ပိုင်းတော့ … မပိုင်လျှင် မရိုက်တော့ပဲ … သေချာ ချိန်လို့ တည့်မှပဲ ရိုက်တော့တယ် .. ဟီး ။ ရိုက်တာ အပြစ်လား … အီး … နှမျောလိုက်တာ …
တုန်တုန်လဲ ကားသမားတွေလို့ပါးစပ်လေးဖြီးပြီး လက်ညှိးလေးထောင် အာကို့ရယ် တပုံလောက်ပေါ့။ ဟီဟိ
တက္ကစီ၊ လိုင်းကား တွေလဲဒီလိုပဲ မသဲရေ။ လမ်းကို သူတို့ဘိုးအေ အပိုင် လေသလာမှတ်တယ်။ rose အိမ်နားမှာက အထူးလိုင်းတစ်လိုင်းရဲ့ ဂိတ်ရှိတယ်။ ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့ချလို့ သူများကား ပိတ်တာ နောက်မှာ ကား အစီး ၂၀၊ ၃၀ ပိတ်လဲ အေးဆေးပဲ သူများဘက် လုံးဝမကြည့်ဘူး။ သူတို့ အဆင်ပြေရင်ပြီးရော နောက်မှာ သူများဖြစ်တာမဖြစ်တာ လုံးဝဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အချိုး၊ ကားအချင်းဖိုက်လာလို့များ မီးပွိုင့်မှာလက်ညိုးလေးထောင်ပြီး အစ်ကိုရေ တစ်စီးလောက်တစ်စီးလောက်နဲ့ မျဉ်းပိတ်ကို ဖြတ်ပြီး ကျော် ရှေ့ကနေအတင်းဝင်တာ နေ့တိုင်း ရုံးဆင်း ရုံးတက်တိုင်းတွေ့ရတယ်။ မီးးဝါကို ဖြတ်မောင်းလို့များ ဖမ်းမယ့်သူမရှိဘူး။ သူတို့လို တစ်စီး လောက်တစ်စီးလောက် နဲ့ နေတိုင်းတောင်းလို့ ကားရကြေးဆို သူတို့တော်တော်ချမ်းသာနေပြီ၊ ကားမောင်းစရာ ကားလိုက်စရာမလိုတော့ဘူး ။
လက်ညိုးထောင်ထားရင် အင်္ဂုလိမာလ နဲ့တွေ့သွားမယ် လို့အော် ပစ်လိုက်တယ်..
တစီးလောက် လို့တောင်းရင် ရော့ ချဉ်ပေါင်ရွက် အိမ်ကြမှချက်စား ဆိုပြီး ဖယ်မပေးဘူး…း)
ခြံမှာစည်း၊ မြစ်မှာကမ်း၊ လူမှာစည်းကမ်း
စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ပညာ
အဲသည်တော့ အဲသည်တော့ …..
ဆိုလိုတာက လူကြီးဆိုတဲ့လူတွေကစည်းကမ်းလိုက်နာခိုင်းတဲ့ထဲမှာသူတို့အမျိုးဆိုလွတ်စေ အမြဲလုပ်လို့ စည်းကမ်းဆိုတာဒို့အမျိုးမပါ လို့ပြောတာပါ။
စည်းကမ်းမဲ့မှုကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်တယ်။
အိုးအိုး ဒါမျိုးဆိုလို့ကတော့ သများတို့ကရိုက်ပြီးသား။ ပေါက်ရဲပေါက်ကြည့်။ သတိသတိသတိ
အထူးသဖြင့်တော့ နေရာတိုင်းအလွန်အကျွံစည်းကမ်းပျက်နေတဲ့ ဒီနိုင်ငံမျိုးမှာ
ချွင်းချက်မရှိတဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မျက်နှာသာမပေးတဲ့ အရေးယူမှု့မျိုးလိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။
ငါရိုက်ပြီး လူအများရှေ့ချပြတာ အရေးတယူရှိပါ့မလားလို့ မထင်ပါနဲ့။
အများအတွက် အကျိုးရှိမယ့် မှန်တာကို ပြောရဲကြရပါမယ်။
အနည်းဆုံးတော့ ဖတ်မိတဲ့သူတွေက ငါတို့ အလှည့်ကျရင် ဒီလို စည်ကမ်းမဲ့ တဲ့ ရှက်စရာအလုပ်မျိုး မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးလေးဝင်ရင်တောင် ပြောရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ယူအက်စ်မှာတော့.. အဲလိုပါ့ဗလစ်မှာ.. စည်းကမ်းဖေါက်တာ.. ရိုက်လို့ကင်မရာလာသိမ်းမှ.. ပိုပြီးတန်ဖိုးတက်တာ..
စစ်ဒဇင်ဂျာနယ်လစ်လုပ်တဲ့သူက.. သိမ်းပါစေ.. သိမ်းပါစေ.. ကင်မရာလာသိမ်းပါစေ.. ပြသနာလာရှာပါစေ… ထိုင်ဆုတောင်းနေမှာလေ…
နိုင်ငံရေးသမားတွေ. လွှတ်တော်အမတ်တွေဆိုတာ… ဒီလိုအကွက်တွေကိုစောင့်ချောင်းနေရတာ…
စစ်ဒဇင်က.. တင်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းဓါတ်ပုံ..အဖြစ်တွေက… သူတို့အတွက်.. လွှတ်တော်မှာနေရာရဖို့.. အားဆေးပဲ..
မီဒီယာကို တလွဲအရမ်းသုံးကြမှာတောင် ကြောက်ရတယ်..။ :?
လမ်းမကြီးတွေ ပေါ်မှာတောင် ဒီလိုပဲ လုပ်နေကြတာပဲ။
ဒီမှာတော့ မမြင်ချင်မှအဆုံးပဲ… နောက်ရှိသေးတယ် ပြိုင်မောင်းပြီး တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောကို ကျော်တက်လို့ လူတွေ သေတာလည်း မနည်းမနောပါပဲ။ ဒါလည်း စည်းကမ်းရှိလာလားလို့ မထင်ပါနဲ့ မလစ်ရင် ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ နောက် ခရီးသည်တွေကို မေ့ပြီး မောင်းချင်သလို မောင်းတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးရှိနေသေးတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ပြုပြင် ပြင်ဆင်သင့်တယ်။ ဒါတောင် ရန်ကုန်လိုမျိုးနေရာက ဆိုက်ကယ်မောင်းခွင့်ပိတ်ထားသေးလို့ ပေးများ အသုံးခွင့်ရှိရင် နေ့စဉ်နဲ့ရက်ဆက် နာရေးကူညီမှုလည်း အချိန်တွေ အားလပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်မိတာပါပဲ။
မမနောပြောတာမှန်၏။ ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ပေးလိုက်လို့ကတော့ ဦးကျော်သူတို့ထမင်းတောင်စားချိန်ရမှာမဟုတ်။